Mashruuca Quudinta ee Wabiga Jhelum ee Kashmir oo ku yaal wadada saxda ah
Jammu iyo Kashmir: Mashruuca Wabiga Jhelum ee dhanka midig
Mashruuc hami leh oo lagu badbaadinayo webiga jiiniska ee Kashmir ee Jhelum ayaa bilaabay inuu natiijo wanaagsan ka helo Jammu iyo dawladda Kashmir oo sii wadaya in halista daadka ay sababtay roobabkii dhowaanta socday ee la dhimay awgood tallaabooyinka ilaalinta ee webiga ee waqooyiga Kashmir.
Jhelum oo ah isha ugu weyn ee waraabka ee Dooxada ayaa waxaa ku dhacay daadadku sanadihii la soo dhaafay. Maqnaanshaha wax talaabooyin ah oo ilaalin ah, webiga ayaa lumiyay awooddiisa qaadista wuxuuna horseeday in la xannibo marinka qulqulka khariidaddiisa ee Baramulla, taas oo halis gelinaysa fatahaada Wabiga.
Tobaneeyo sano oo dib-u-dhac aan caadi ahayn ah, Mashruuca Ilaalinta ee Jhelum waxaa daah-furay Madaxa Guud, Omar Abdullah, oo ka yimid waqooyiga degmada Kashmir ee Baramulla bilowgii sannadkan. Dadaallada ilaalinta ayaa helay kor u kac weyn kadib markii Dowladda ay soosaartay labo nooc oo farshaxanimo casri ah oo laga soo saaray Mareykanka si loo sameeyo hawlgallada qashinka.
"Hawlaha ilaalinta ee hadda ka socda Jhelum ee degmada Baramulla waa lagu guuleystay sidii aan uga baxsan lahayn khatarta fatahaadda ee dhowaanta. Qulqulka joogtada ah waxaan ka saarnay xanibaadaha webiga ee Baramulla oo waxaan si aad ah u kordhineynay qulqulka wabiga." Taj Mohi-ud-Din, Wasiirka Waraabka iyo Xakamaynta Daadka ayaa u sheegay Greater Kashmir.
Laga soo bilaabo Verinag oo ku taal koonfurta Kashmir, Jhelum waxaa ku darsaday afar durdur, Sundran, Brang, Arapath iyo Lidder koonfurta Kashmir ee Islamabad (Anantnag). Ka sokow, durdurro yaryar sida Veshara iyo Rambiara ayaa iyaguna ku quudiya webiga biyo cusub.
Jhelum macnihiisu waxay marayaan dhinaca wabiga ah ee koonfurta ilaa waqooyiga Kashmir waxayna degtaa Wullar, harada biyaha ugu badan ee Aasiya, ka hor intaanay ku shubin Pakistan Kashmir oo loo maro Baramulla. Khubaradu waxay sheegeen in daadadka ba'an ee 1959 ay u sababeen waxyeelo gadaal u ah Jhelum sababtoo ah qulqulka hooseeya ee ka yimaada Wullar Lake ee waqooyiga Kashmir kaas oo ku dhowaad ay jareen ururin culus oo mareenka qulqulaya iyo kan cidhiidhiga qulqulaya.
"Waxaan ka saarnay tan badan oo shaashadda ah kanaalka qulqulka. Mashruuca Ilaalinta ee Jhelum waa mid iskiis u ilaashanaya madaama iibinta shabeelku uu ka keenay dowladda labo jeer bilooyinkii la soo dhaafay. Lacagtaan waxaan u adeegsan doonnaa ilaalinta wabiga mudada dheer,“Taj wuxuu yidhi ku darista labada Maraykanka ee kaydinta tamarta waxay dedejisay hanaankii ilaalinta.
Qulqulayaashu waxaa soo saaray shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka Diidmada Ellicott- mid ka mid ah soosaarayaasha gaboobay ee qalabka qalalan. Dhacdo ahaan, Ellicott Dredges wuxuu u keenay dredger ugu horreeyay ee ilaalinta Jhelum ee 1960. Qufulka waxaa shaqaalay Ra'isalwasaaraha markaa Jawahar Lal Nehru.
Waxaa lagu iibsaday qiime dhan Rs 12 crores, dredgers-yada loo yaqaan Soya II iyo Budshah II waxaa loogu talagalay inay kudhasho qoto dheer. Aijaz Rasool oo ka tirsan KEC Mumbai wakiilka Ellicot Dredges ee Hindiya, ayaa sheegay in hawlgallada qashin-qubka ahi ay si buuxda uga socdaan Janbazpora iyo Juhama ee Baramulla.
“Markii aan ku harayno meelahaas waxaan ka baxsan karnaa boqollaal sano oo daadad ah Dooxada dhexdeeda. Laakiin tan suurtagal maahan haddii aan qallajin lahayn, ” ayuu ku daray.
Saraakiisha waxay yiraahdeen Raiisel wasaaraha markaas Jammu iyo Kashmir Bakshi Ghulam Muhammad dabayaaqadii '50s waxay la xiriireen Dowlada India si ay u raadsato khubaro talo iyo xalin injineer dhibaatada. Iyada oo la raacayo hagista khubarada Golaha Biyaha Dhexe, Qorshe Master ah oo loogu talagalay shaqooyinka qalloocan ee Jhelum min Wullar ilaa Khadanyar ayaa la sameeyay.
Mashruucu wuxuu saadaaliyay in qotada dheer iyo balaadhinta Jhelum laga bilaabo Ningli ilaa Sheeri laga bilaabo farsamada gacanta. Si kastaba ha noqotee wakhtigaas, haaraha alaabada laguma sameynin lagamana heli karo India. Saraakiisha waxay sheegeen inay ugu wacan tahay fara gelin shaqsiyadeed oo Raiisel wasaaraha markaas Jawahar Lal Nehru in la iibsado alaabada.
Si kastaba ha noqotee, qalliinka qashin-qubka ayaa sii socday ilaa 1986. Waxaa loo hakiyey dhaqaale la'aan iyo tas-hiilaad la waayey. Tan iyo markaa tan tan tufaaxa faafa ayaa ka dhacday Jhelum sababtuna waxay tahay xaalufka degdega ah ee meelaha ay ku sugan yihiin. Tani waxay hoos u dhigtay waxtarka daadadka qulqulka qulqulka qulqulka Jhelum iyo mas'uuliyadiisa qaadista awoodda laga soo bilaabo 35000 cusecs ee 1975 illaa 20000 jaantusyada xilligan la joogo,Saraakiisha ayaa yidhi.
Waaxda Waraabka iyo Maareynta Fatahaadaha ayaa 2009 u dirtay mashruuca Rs 2000 crore Wasaaradda Kheyraadka Biyaha si loo xayiro. Mashruuca waxaa ku jiray howlo badan oo dib-u-soo-celin ah oo ay ka mid yihiin hagaajinta Jhelum ee xilliyadii burburay ee khadadka dibedda, ilaalinta iyo shaqooyinka nabaad-guurka iyo kordhinta hufnaanta biyaha.
Si kastaba ha noqotee, Wasaaradda ayaa oggolaatay kaliya qayb ka mid ah mashruuca oo ku kacaya Rs 97 crores si loo fududeeyo waxqabadyo degdeg ah oo ay ka mid yihiin soo iibinta mashiinnada iyo qulqulka Jhelum, gaar ahaan marinnada daadadku ku fatahaan ee Srinagar iyo qulqulka qulqulka Daubgah iyo Ningli ee Baramulla.
Taj wuxuu sheegay in dhammaan xogta ku saabsan qaadashada iyo qaadashada heerarka biyaha, cabirka daadadka iyo awoodda xambaarsiga Jhelum ee XXX sano ee la soo dhaafay la qodbay.
"Waxaan sidoo kale sameynay qulqulka kanaalada daadadka daadadka ee Srinagar iyo aagagga isku xiga oo aan ka aheyn bilowga wadista Sonwar ilaa Old City. Markii la dhammeeyo qashin-qubka, waxaan sidoo kale qorsheyneynaa inaan ka saarno dhammaan xirmooyinka webiga qulqulka laga soo bilaabo Islamabad illaa Baramulla. Dhawr sano gudahood, Jhelum waxaa lagu soo celin doonaa quruxdeedii hore, Taj ayaa raaciyay.
Waxaa laga daabacay DredgingToday